Ngophuhliso lwasekhaya nakwamanye amazwe, iindidi eziqhelekileyo ze-hose clamps kwiimarike zangaphandle ngoku zigciniwe, kwaye ukusetyenziswa kwe-hose clamp kukhulu kakhulu, ngakumbi iintlobo eziqhelekileyo. Nangona kunjalo, ngokuphuhliswa kwetekhnoloji, ngakumbi kule minyaka mibini idlulileyo, imakethi yekhaya isondele ekuhlaleni, ekhokelela kukhuphiswano olunamandla lweemarike. Abanye abavelisi bade balwa iimfazwe zamaxabiso, bekhokelela kwisiphithiphithi kwimarike yonke, engalunganga ekuphuhliseni wonke umzi mveliso. Ngapha koko, kulula ukuyiqonda imeko yangoku ngokuhlalutya imeko yangoku Isizathu sale meko.
Nangona ukuqala kwemarike yemveliso yasekhaya iqhelekile, ukukhula ngexesha elizayo akunakuqhubeka. Ngokuphathelele kwiintlobo eziqhelekileyo, phantse akukho mqobo kunye neemveliso zamazwe aphesheya. Nokuba indleko zemveliso ziphantsi, kwaye inzuzo yexabiso ayikho. Unokwenza kuphela inzuzo ngokobungakanani, ngokubhekisele kubuchwepheshe obuphambili. Uphuhliso lwentengiso yangoku lubangelwa ikakhulu kukuphuhliswa kwetekhnoloji yasekhaya ephambili, kodwa iimveliso eziphezulu zokugqibela zihlala zingenanto, ezinganelanga ukufezekisa imfuneko yentengiso.
Umsantsa kwintengiso yezizwe ngezizwe mkhulu kakhulu. Ukubuyela umva kweenkqubo ezininzi kukhokelela kwisambatho sokuphuhliswa kwetekhnoloji, kwaye iimveliso azinakuhlangabezana neemfuno zokuchaneka okuphezulu koomatshini kunye nobunjineli bangoku. Onke amashishini awanakuqikelela, kufuneka aqinisekise ngomgangatho ophezulu weemveliso zawo, kwaye akufuneki ukuba akhuphisane ngokufanelekileyo ukuphazamisa imeko yemveliso. Ukuphuhlisa imarike yangoku, badinga ukusombulula iingxaki ezisisiseko kwisayensi kunye netekhnoloji. Ngaphantsi kweemeko, ukuphuhliswa kwesayensi kunye netekhnoloji kunokwenza ishishini kwindawo engakhohliyo kuphuhliso lwangoku olukhawulezileyo. Akukho bunzima buphilayo, kuphela ngabantu abangakwaziyo ukurhoxisa, "ubuchule" obuya kuhlala buyinto eqinisekileyo yomenzi wethu we hose!